Carlos Bilardo: "Argentina Hadii Ay Dooneyso In Messi U Qaado Koobka Aduunka Halkaan Arrin Ha Siiso" %
Carlos Bilardo: “Argentina Hadii Ay Dooneyso In Messi U Qaado Koobka Aduunka Halkaan Arrin Ha Siiso”
Wararka MaantaKoobka Adduunka
By Abdirahman	 On May 16, 2018
Ugu yaraan Hal bilood ayaa naga xigta bilaashada Koobka Aduunka ee 2018, waxaana sanadkaan uu yahay mid ka duwan kaan xamaasad badan dhacadda ugu wayn kubada cagta aduunka oo dhan marka Banooni lasoo hadal-qaado.
Koobka Aduunka 2018, oo sanadkaan lagu qabanayo wadanka Ruushka, ayaa waxaa ka qeyb qaadanaya 32 xulal, kuwaasoo xusul duub ugu jira inay meel sare ay gaaraan, waxaana kuwa ugu cad-cad ee loo saadaalinayo kamid ah Argentina.
Carlos Bilardo oo ah ciyaaryahan hore, macalin hore iyo taageere Argentina ah, ayaa wuxuu sheegayaa in Messi uu wax fiican usameyn karo dalkiisa, waa hadii laga dhigo mid xur u ah inuu ka dheelo boos walba oo garoonka kamid ah.
Isagoo wareysi siiyay TY Sport Tv ee dalka Argentina ayaa wuxuu afka ku balaariyay Carlos Bilardo, in Argentina ay ka awood badan kana wanaagsan tahay sanadkii 2014, markaasoo Final-ka ay gaaraan, inkastoo khasaaro ay kala kulmeen Germany.
“Waxay sanadkaan ay haystaan fursad wayn oo wanaagsan,” ayuu Carlos Bilardo ku bilaabay hadalkiisa.
“Messi wuxuu ubaahan yahay in la siiyo xuriyad fuud, iyo waajibaad daafac la’aan,” ayuu hadalkiisa kusii daray
“Kooxdeena waa ay ka xoog badan, kaan wanaagsan sidii ay ku baxeen 2014-kii, markaasoo ay ku guuleysan karayn,” ayuu tilmaamay
“Waxaan ahayn kuwa ka fiican Germany [markii ay khasaaro kala kulmeen final-ka Koobka Aduunka],” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay.
Ugu dambeyn, Carlos Bilardo oo wax laga weydiiyay sida uu u arko in kulankii saaxiibtinimo ee Argentina khasaaraha 6-1 ay kala kulmeen dhigooda Spain, ayaa wuxuu hoos udhigay natiijadaas, isagoona tilmaamay in uusan ahayn kulankaan mid muhiim ah.
ArgentinaCarlos BilardoLionel Messi
Chelsea ayaa kusoo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga khadka dhexe ee …….